Xildhibaan katirsan baarlamaanka Galmudug oo sheegay in Muqdisho uu ka bilaawday Shirar lagu xalinayo Khilaafka Galmudug – Kalfadhi
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Galmudug oo sheegay in Muqdisho uu ka bilaawday Shirar lagu xalinayo Khilaafka Galmudug
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in magaalada Muqdisho uu ka bilaawday shirar ku aadan xal u raadinta Khilaafka hogaanka Galmudug ka dhax-jira iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Kulamada ka socda magaalada Muqdisho ayuu sheegay in ay wadaan Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ay degaan doorashadoodu tahay Galmudug waxaana soo abaabulay Xukuumadda Soomaaliya si loo go’aamiyo muranka raagay ee ka jira degaanada Galmudug.
Xildhibaanka ayaa ka digay in kulamadaasi ay noqdaan kuwa dabin loogu dhigayo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf, islamarkaana ay tahay in laga talo geliyo talaabo walba oo la qaadayo.
“Muqdisho waxaa ka socda kulamo ay soo abaabushay Xukuumadda Kheyrre waxaana yeelanaya Xildhibaanada degaanka ee BFS “ ayuu yiri Cabdiraxmaan Cali Ciise. “Uma dhama Xildhibaanada Galmudug ka soo jeeda ee labada Gole waxaana yeelanaya xubno gaar ah Kheyrre iyo Farmaajo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise
Cabdiraxmaan Cali Ciise ayaa sheegay in kulamada ay qeeb ka yihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir, iyo Madaxweyne ku ixgeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey balse ay ka maqan yihiin mas’uuliyiinta garabka kale ee Galmudug.
“Waxaan ognahay in kulamada ay qeyb ka yihiin Carabey iyo Casir dhinaca kalane cidna uma joogto waxay taasi muujineysaa in wixii ka soo baxa aysan xalaal aheyn” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan Baarlamaanka Galmudug.
“Waxaan ka digayaa in kulamadaas ay noqdaan kuwa uga sii dara Galmudug iyo maleegidda dabin ka dhan ah Madaxweyne Xaaf” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan Golaha Wakiilada Galmudug.
Baarista Kalfadhi: 11 kulan oo ka baaqday iyo 120 xildhibaan oo ka maqan Golaha Shacabka